यातायात ब्यवसायी पोखरेल भन्छन्– सिन्डीकेट राज्य र यात्रुमाथिको ठगी हो - hamro Desh
सामाजिक संस्था अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समितिहरुलाई कम्पनी अन्तर्गत दर्ता गर्ने प्रावधान राखेर यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको सिन्डीकेट तोड्न सरकारले सहासी निर्णय लिएको छ । राज्यले निर्माण गरेको सडकमा गाडी चलाउने, आफू बाहेक अन्यले गाडी चलाउन नपाउने सिन्डिकेट लागू गर्ने र यातायात ब्यवसाय मार्फत गरेको आम्दानीबाट राज्यलाई कर तिर्नु नपर्ने सुविधा लिइरहेका यातायात समितिहरु अहिले सरकारसँग रिसाएका छन् ।
उनीहरु आफूले गाडी चलाएर समाजसेवा गरिरहेको वताइरहेका छन् भने ती रुटमा अन्यले गाडी चलाउन आफूहरुसँग अनुमति लिनु पर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट कायम राख्न उनीहरुले आन्दोलन समेत घोषणा गरेका छन् । सरकारले भने सिन्डीकेट हटाउन अन्य यातायात कम्पनी दर्ता गरी सेवा अनुमति दिइरहेको छ ।
यस्तै कम्पनी मध्येको एक कम्पनी हो पश्चिम नेपालको दाङ लगायतका क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन सुरु गरेको मालिका–कालिकायातायात प्रालि । नमस्ते राप्ती, बीरगञ्ज यातायात, जनमुखी यातायात नेपालगंज, बागलुंग कालिका लगायतका ८ कम्पनी मिलेर उनीहरुले यातायात सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी कम्पनी मध्येको मालिका–कालिका यातायात प्रालिका अध्यक्ष सुमन पोखरेलसँग सिन्डीकेट हटाउन सरकारले चालेको कदमबारे चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
यातायातमा यति ठूलो ब्राह्ललुट रहेछ, यस्तो हुँदाहुँदै यस अघि किन यो हटाउन लगेन सरकार ? कारण के थिए ?
सिन्डीकेड पक्षधर र राज्य चलाउने केही व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा यो ब्रहमलुट भएको हो । सिन्डीकेड पक्षधरहरुले सरकारलाई प्रभावमा राखेकाले यसअघि सरकारले हटाउन नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाई पनि एक ब्यावसाही हुनुहुन्छ। तपाईं चाहिँ किन सिन्डिकेट हटाउने सरकारको पक्षमा ?
स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्तरीय सेवा र यात्रुमैत्री वातावरणका लागि सिन्डिकेट हटाउन जरुरी छ । यही कारणले हामी सरकारको पक्षमा छौं । राम्रो सेवा दिनेले प्रतिस्पर्धासँग डराउनु पर्दैन । जसले राम्रो सेवा दिंदैन उसले अरुलाई प्रतिस्पर्धामा आउनबाट रोक्न खोज्छ । यो सामान्य कुरा त सबैले बुझेकै छन् नि ।
तपाईं आफू ब्यावसायी पनि हुनुहुन्छ र यहाँको सबै पक्षको जानकार हुनुहुन्छ , सरकारले करको कुरा ल्याएपछि यता यातायात समितिहरुले रातारात करोडौं रकम बैंकबाट निकालेको समाचार बाहिर आएको छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
अझ यो तपाईंको प्रश्नलाई जोड दिएर भन्नु पर्दा यी सिन्डिकेड पक्षधर संस्थाहरु वर्षौं देखि सामाजिक संस्थाका रुपमा सिमित व्यक्तिले मात्रै संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । यहाँ यिनीहरुको मात्रै लामो समयसम्म प्रभाव रह्यो । यिनीहरुका सम्पत्ति प्रसस्तै जम्मा गरे । अहिले आएर सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि, त्यो कुरा न्यूजमा आयो । करोडौं रकम लुकाएका न्यूजहरु तपाईंहरु वाटै सुन्नमा आईरहेका छन् । अव भवनहरु, जग्गाहरु, पार्कहरु विभिन्न सम्पत्तीहरु छन् । सायद अव यी सिन्डिकेट धारी पक्षहरुले यो पनि लुकाउने प्रयास गर्छन् । सिन्डिकेट धारी हरुको हैसियस पनि यही हो भन्दा फरक नपर्ला ।
यातायातलाई गैर नाफामुलक गैर सरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता गर्ने ब्यवस्था सरकारले हटाएको छ । तपाईंलाई यो निर्णय कस्तो लागेको छ ?
निश्चित रुपमा व्यवसाय गरिसकेपछि राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ । तर कर के–कति र कुन हदसम्म तिर्ने भन्ने कुरा चाँही व्यवसायी र राज्य वसेर छलफल हुन जरुरी छ ।
सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र भएर पनि नाफामुखी ब्यवसाय गर्ने तर, राज्यको कर दायराबाट बाहिर रहेको छ, यसले राज्यलाई कति नोक्सानी हुन्छ ?
अवश्य पनि राज्यलाई नोक्सानी छ । यो प्रश्न उहाँलाई सोध्नुहोस् जसले आजसम्म कर तिर्नु भएको छैन । हामी त स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्तरीय सेवा र यात्रुमय वातावरण बनाई यात्रुलाई सेवा दिंदै र राज्यलाई कर पनि तिर्दै आईरहेका छौं ।
गैर सरकारी संस्था अन्तर्गत दर्ता गरेर यातायात सञ्चालन गर्दै आएका ब्यवसायीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन्, यस्तो आन्दोलन सिधै लुट्न पाउनु पर्छ भन्ने जस्तो भएन र ?
विगतमा लामो समय देखि यसरी नै सरकारमा रहेका केही व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारेर आजसम्म यस्तो सिन्डिकेट सञ्चालन गर्दै आएका थिए । आज सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि आन्दोलनमा आउनु स्वाभाविक नै हो भन्ने लाग्छ ।
सरकारले गरिवहरुको रोजीरोटी खोसेको तर्क ब्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । सिण्डीकेट नचलाएर राज्यलाई कर तिर्दै ब्यवसाय गरी यात्रुलाई सेवा दिंदा हुँदैन र ?
यो प्रश्न त्यसलाई गर्नुहोला जो सिन्डिकेडको पक्षमा छन् ।
गैर सरकारी संस्थाका रुपमा गरिएको लगानी करको दायरा बाहिर रहनु एक प्रकारको ठगी होइन ?
यो त ठगी नै हो, राज्यमाथि गरेको घात नै हो । कुनै पनि नाफा मुलक व्यवसाय गरेर आफू करोडौंमा खेलेर राज्यलाई नाफा वापतको कर नतिर्नु भनेको त एक प्रकारको अपराध नै हो ।
गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएर यातायात ठप्प पार्ने कुरा आइरहेको छ, आफूले सेवामुलक काम गर्दै आएको भन्ने तर, एकलौटी नाफा नपाउन्जेल गाडी गुडाउँदैनौं भन्न पाइन्छ ?
यो सरासर गतल कुरा हो । सरकारले गरेको निर्णयलाई च्यालेन्ज गर्नु भनेको एक किसिमको अपराध हो । सरकारले केही न केही विकल्प खोज्ला हामी चाहीँ हाम्रा सवारी साधन ठप्प पार्दैनौं घरमा, ग्यारेजमा थन्काउँदैनौं ।
उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिस्पर्धा गर्दा सरकारले रोजीरोटी खोस्यो भन्न पाइन्छ ? सर्वसाधारणलाई त जसले राम्रो सेवा दिन्छ उसैसँग शुल्क तिरेर सेवा लिने अधिकार छ नि ? के राज्यले सर्वसाधारणको अधिकार हनन् गरेर सीमित ब्यवसायीलाई पोस्नु पर्ने पर्ने हो ?
निश्चित रुपमा होइन, यसैका लागि त हाम्रो लाडाईं चालु छ ।चक्रपथ डटकमबाट